Ny rehetra momba ny GPS sy ny fitaovana - Geofumadas
Rehetra sy ny fitaovana momba ny GPS
Ity pejy ity dia famintinana henjana momba ny lohahevitra tafiditra amin'ity tranonkala ity momba ny GPS sy ny Fitaovana. Tsy misy ny fanavaozana farany.
GPS Mobile Mapper, Promark ary ny hafa
Andraikitry ny MobileMapper sy Promark amin'ny teny Espaniôla
Fanandramana ny Promark3 ... sary fotsiny
GPS Mobile Mapper 6, Data nahafaka
Google Maps avy amin'ny Mobile Mapper 6
Aiza no hividianana GPS
MobileMapper 6, fahatsapana voalohany
60 Fampitahàna tabilao Total Stations
Mamoròna fifandraisana amin'ny CAD Civil avy amin'ny angon-drakitra Total Station
Fitaovana ampiasaina amin'ny GPS sy ny station Leica
Manana tobinà robot tanteraka ve isika?
Fitaovana sy fampianarana
Trimble dia mividy Ashtech; inona no azontsika antenaina
Ny dokam-barotra amin'ny lehibe ao Geo
Fanitsiana ny data amin'ny rindrambaiko CAD / SIG
Kaody fitondram-panjakana, araka ny tokony ho izy
Manaova an-tserasera amin'ny Google Maps
Fanairana ny halatra fitaovana fanodinana
GPS amin'ny fitaovana finday
GPS ny haben'ny singa manan-danja sy telefaona
Fametrahana gvSIG Mobile
GPS karazana an'i Venezoela, Però, Kolombia ary Amerika afovoany
Lahatsoratra hafa izay miresaka GPS sy fitaovana
6 Geoinformatics, betsaka ho an'ny mpandinika
Ity tantara ity ihany, ankehitriny miaraka amin'ny GPS
13 Valiny amin'ny "GPS sy fitaovana rehetra"
Amaury hoy izy:
Azoko tsara ny toe-javatra, raha ny soridrefitany tena mikitoantoana tena mitranga io aina toe-javatra, hoy ianareo: fa ny mahitsi- ary mametraka ny kora isaky ny vertex, dia tokony hijery hafa lalana lafin-javatra mba hanome ny heviny, fa homeko ny teboka ny fomba fijery mba hahitana raha manampy na inona na inona, ny iray kora any amin'ny avo indrindra, ary any amin'ny toerana eo amin'ny mety ho ampy, satria 20 km dia tsy lavitra ny GNSS fitaovana sy hametraka repeaters stratejika ao an-tampon'ny fitoerana avo any miezaka ny hanafina faritra izay tsy misy fandrakofana. Hanararaotra izay efa manana, dia ho tsara ho fantatra raha ho azy amin'ny finday kaonty aterineto tany amin'ny faritra sasany, angamba dia afaka hampihatra ny NTRIP + RADIO mitambatra. Na inona na inona avelako ny namany Sary, info@acnovo.com
manana tokotokony faritra 30000 hektara fananganana mahitsi- ny 20000 M M 15000 isaky ny lafiny amin'ny ERP ny vertices manana NET R9 Trimble (ERP, maharitra Tracking Station) Ary midika 1 ERP, ny anatiny soridrefitany ny ao amin'ilay mahitsi- dia mikitoantoana (ampy eny an-tendrombohitra), izany toe-javatra mahatonga ny GPS miasa amin'ny Rover RTK Trimble R10 faneva very, dia nihevitra ny hametraka GPS famantarana repeater onjam-peo. ny fikarohana dia izay no tsara indrindra ho RTK mifandray fandrefesana, onjam-peo fifandraisana amin'ny andian-dahatsoratra na amin'ny mirazotra.
Jose Salas hoy izy:
Salama! Niezaka ny mametraka sary georeferenced fototra ao Topcon GPS GR5 hetra, ary tsy afaka sary an-tsaina. Inona no tokony hataoko?
Tata hoy izy:
Salama daholo ny rehetra, manana gps ashtech 120 aho nibitsibitsika tamin'ny efijery spectra tany am-piandohana misy misy fomba hamerina izany na hamaha azy
ALEJSN hoy izy:
Oktobra, 2013 ao
Hi guys mila mahafantatra aho hoe afaka manao na vahaolana ho an'ity olana kely ity.
Manana GPSMAP 62 SC aho. Nanao fanadihadiana niaraka tamin'ny teboka sy sarin'ireo tetezana sy làlan-dàlana aho ary ankehitriny tsy afaka maka sary aho na inona na inona, ahoana no azoko atao na inona programa hampiasana an'izany, ny sary dia misy mpandrindra ary tsy mivoaka ny afaka maka azy amin'ny google eart raha toa ka afaka manantena anao hanampy ahy misaotra indrindra.
Cesare Dantonio hoy izy:
Septambra, 2013 at
Namaky avy amin'ny olona iray aho izay milaza fa ny rakitra .sp3 (esfemeris mazava) dia azo alefa amin'ny Rinex amin'ny alalan'ny rindrankajy BERNESE. AO AMINAREO NY FANONTANIANA ITY? ary raha azo atao avy amin'ny fampidinako ilay rindrambaiko. Efa niditra ny pejinao ity ity rohy ity:
http://www.bernese.unibe.ch/ Na izany aza dia tsy hitako ilay installer. Misy olona afaka manampy ahy hanazava raha azo atao izany na tsia. - MANDRAKARIVA NY ANJARA.
Guillermo Correa Arias hoy izy:
Aogositra, 2013 at
Afaka mandefa ahy catalago izy ireo.
Hello Diego, tsy fantatro ny EPOCH ampy hanome toro-hevitra anao.
Fausto, jereo ny datin'ny solosainao sy ny solosainao. Tsy tokony hanome olana aminao aho. Inona ny rindrambaiko inona no ampiasainao?
Fausto Girls hoy izy:
Mila mahafantatra izay mitranga amin'ny rindrambaiko MSTAR potsproceso Magellan Promark X hatramin'izao ka tsy afaka manao izany asa manome ahy ny fahadisoana eo amin'ny daty alimanaka izay amin'izao fotoana izao mampiasa rindrambaiko ity mba hahafahako hanazava ny zava-mitranga mila fanampiana.
Diego Rivera hoy izy:
Tiako ny hanana ny heviny momba ny GPS L1 EPOCH 10 noho ny fanadihadiana ambony momba ny fahamendrehana tsara sy ny fampitahana azy amin'ny Mobile Mapper 10. Misaotra anao
Ekipa tena tsara izy ireo, misy ny tsy fatiantoka izay tsy mahita fanohanana foana rehefa sendra fahasimbana ianao. Miankina amin'ny tanàna izay misy anao, fa amin'ny ankapobeny any Amerika Latina dia manana toerana ambany kokoa izy ireo raha ny fanajana an'i Sokkia, Leica ary Topcon
Bernardo hoy izy:
Salama malala, avy any Arzantina aho ary te hahafantatra izay hevitry ny marika marika manga sy atsimo ho an'ny gara tanteraka. Eto dia tsy dia fantatry ny olona izy ireo, koa tiako ho fantatra, raha nanandrana izy ireo, inona no vokatr'izany… mahaliana ny manana ny hevitry ny olona iray efa manana traikefa miasa amin'ireo marika ireo.